Madaxweyne Galeyr oo muddo 12-saacadood ah loo qabtay inuu Buuhoodle isaga baxo (VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Galeyr oo muddo 12-saacadood ah loo qabtay inuu Buuhoodle isaga baxo (VIDEO)
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galeyr ayaa muddo 12-saacadood ah loo qabtay inuu magaalada Buuhoodle isago baxo, kadib markii ciidamada gobolka Cayn ee ku sugan magaalada Buuhoodle ay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu heshiis la galay maamulka Somaliland.
Saraakiisha hogaaminaysa ciidankaas oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inay dagaal ku qaadi doonaan Prof. Cali Khaliif Galeyr, hadii uu kusii sugnaado magaalada Buuhoodle, islamarkaasina ay halkaasi ka saari doonaan.
Waxay sidoo kale saraakiishaasi ku hanjabeen inaysan marnaba dhici doonin inay ogolaadaan cid heshiis la gasha maamulka Somaliland islamarkaana ay dagaal ku qaadi doonaan cid kasta oo soo fara-gashata magaalada Buuhoodle.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, iyadoona dhinaca kale ciidanka ku sugan magaaalada Buuhoodle ay isku diyaarinayaan inay weerar ku qaadaan ciidanka la socdo madaxweynaha maamulka Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galeyr.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadaan adag ayaa timid kadib markii madaxweynaha maamulka Khaatumo Prof. Cali Khaliif Khaliif uu shaaciyay inuu wada-hadal la furay maamulka Somaliland, taasoo ka careeysiisay saraakiisha hogaamineeysa ciidamada maamulka Khaatumo ee ku sugan gobolka Cayn.